नेपाली फिल्म, हलमा होइन युट्युबमा रिलिज गर्नुपर्ने अवस्था - Bibechana Bibechana
६ बैशाख २०७७ १३:३६ ||
नेपालको चलचित्र बजार डामाडोल भएको छ । कोरोना भाइरसका कारण सिनेमा हल बन्द छन् । लक डाउनअघि बन्द भएका हल तत्काल खुल्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन । नयाँ फिल्म निर्माणको विषय कसैले सोचेका पनि छैनन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।
सहज अवस्थामा समेत अधिकाङ्श चलचित्र घाटामा गइरहेको बताउने निर्माता यो बेला झन् झस्किएका छन् । पछिल्ला वर्ष चलचित्रमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी थियो । पैसा कमाएपछि पहिचान र परिचयको भोकले सताएका गैरआवासीय निर्माताको छवि बनाउने दाउमा हुन्थे ।
गैरआवासीय नेपाली अहिले आफैं कोरोनाको चपेटामा छन् । उद्योग हुनेहरु उत्पादन र सेवा बन्द हुँदा घाटामा छन् । रोजगारी गर्नेहरु कामको अभावमा आर्थिक सङ्कटमा डुबेका छन् । यसको असर अब नेपाली चलचित्रको लगानीमा पनि छर्लङ्ग देखिनेछ ।
२०७५ मा ९६ चलचित्र रिलिज भएका थिए । २०७६ मा यो सङ्ख्या घटेर ५५ मा झर्यो । २०७७ सालमा चलचित्रको कति होला अनुमान गर्न पनि मुस्किल छ । लगानी स्रोत बन्द हुँदैछ । बजारको भर छैन । यसै पनि चलचित्रको व्यापार जुवा हो । त्यसमा पनि समयले साथ नदिएपछि आकर्षण घट्छ ।
२०७६ मा रिलिजका लागि डेट लिइसकेका चारवटा चलचित्र रिलिज हुन सकेनन् । निर्माता अर्जुन कुमारको चलचित्र चपली हाइट–३ निर्माण सम्पन्न भएर पनि अड्किएको छ । अब कहिले रिलिज हुने हो निश्चित छैन । रिलिज कुरेर बसेका चलचित्र हलमा आउँछन् जस्तो पनि लाग्दैन । हलमा होइन युट्युबमा रिलिज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसके निर्माता निर्देशक ।
सङ्मणको चौतर्फी असर परिरहेको अहिलेको दुनियाँमा चलचित्र उद्योगमात्रै सुरक्षित रहने भन्ने सवाल भएन । गत वर्षको फागुनमै तयार भएर रहेका १६ वटा नयाँ चलचित्र रिलिज हुन सकेका छैनन् । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो ? अनिश्चित छ ।
विदेशमा रिलिज गर्ने भनिएका चलचित्र पनि रोकिएका छन् । रिलिज हुन नपाएपछि हलको वैकल्पिक माध्यमतर्फ दर्शकको ध्यान मोडिन थालेको छ । चलचित्र निर्माता सङ्घका महासचिव रोज राणा नेपाली चलचित्रको अवस्था दयनीय भइसकेको बताउँछन् ।
साम्राज्ञी र प्रियङ्काको ओरालो यात्रा
अहिले चलिरहेका नायिकाको आयु कति होला ? कति समय टिक्लान् उनीहरु ? उदाहरण लिऊँ, नायिका
बन्द हुँदै कौन बनेगा करोडपति
भारतीय टेलिभिजनको लोकप्रिय गेम शो कौन बनेगा करोडपतिको ११औं सीजन चार दिनपछि बन्द हुँदैछ ।